ETLAWM MUALKUAM ZOGAM NUAM: online ပေါ်မှာ
Online ပေါ်မှာ ကိုယ်ပိုင် လက်မှတ်တစ်ခု ထိုးကြည့်ရအောင်
'သီချင်းလေးသာ ဖွင့်ထားပေးလိုက် အပီအပြင်ကမယ့် အရုပ်လေးတွေရဲ့Code လာယူပါ'
လှချင်သော မိန်းကလေးများ အတွက် (Exercises)
Online ပေါ်မှာ အမြန်ဆုံး Animation လုပ်နိုင်မယ့် Site များ
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နိုင်ငံတာက ကလူပျို/အပျိုတွေရှာချင်ပြီလား?(ကြူကြူစိန်များအတွက်)
Online ပေါ်မှာ လိုတဲ့စာအုပ်ဘယ်လိုရှာမယ်
Online ပေါ်မှာ Microsoft Office သုံးရအောင်
Online ပေါ်မှာ File Size ကြီးကြီးတွေကို ဝေမျှချင်တယ်ဆိုရင်
Online ပေါ်မှာ Bookmarks လုပ်မယ်။
လူတစ်ယောက်ဟာကိုယ်ပိုင်လက်မှတ်တစ်ခုကို တလေးတစားနဲ့ တန်ဖိုးထားသင့်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်မှတ်တွေ အများကြီးထိုးစရာ ကိစ္စတွေရှိလာတဲ့ အခါမှာ တစ်ခုချင်းစီမှာ
လက်မှတ်လိုက်ထိုးဖို့ အဆင်မပြေတော့တာမျိုးတွေ ၇ှိတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ရဲ့ လက်မှတ်တစ်ခုကို ( အပျော်သဘောနဲ့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ) online ကနေ ဖန်တီးပေးထားလို့ ရပါတယ်။
လွယ်လွယ်လေးပါပဲ။ ပထမဆုံး www.mylivesignature.com ကိုဝင်ပါ။
သူ့ မှာ လက်မှတ်တစ်ခု ဖန်တီးဖို့အပိုင်း (၃) ပိုင်းရှိပါတယ်။
ပထမတစ်ခုက---သူပေးထားတဲ့ အဆင့်လေးတွေအတိုင်း လိုက်လုပ်ရတာပါ။ creationwizard လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ကိုယ့်အမည်ကို ရိုက်ထဲ့ပေးရုံပါပဲ။ပြီးရင်သူ
လုပ်ပြီးယူရပါတယ်။ html နဲ့လိုချင်ရင်လဲထုတ်ပေးတာမို့blog ရေးနေတဲ့
နောက်တစ်ခုက -- mouse ကိုသုံးပြီး paint ထဲမှာပုံဆွဲသလို ဆွဲပေးရမှာပါ။
တတိယတစ်ခုကတော့---scan ဖတ်ထားတာကို သုံးပြီး ဖန်တီးရတာပါ။
ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာတော့ပထမဆုံးနည်းကမဆိုးဘူးဗျ။ ဒါပေမဲ့ လူဆိုတာကလဲ အကြိုက်ကတစ်မျိုးစီဆိုတော့ကိုယ်တိုင်သုံးကြည့်ဖို့ပဲ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ M51A က member တွေonline ပေါ်မှာ လက်မှတ်တစ်ခု
ကျွန်တော် ဘလော.မရေးတာတောင် တော်တော်ကြာရောပေါ.။
အောက်က အရုပ်လေးတွေကို ကြည်.လိုက်ပါ။
သီချင်းလေးနဲ. ဒီကနေတဲ. အရုပ်ကလေးတွေနဲ. အရမ်းလိုက်တာပဲ။
ကိုယ် လိုချင်တဲ့ ပုံအောက် က Code ကို Copy သာ ကူးသွားတော့ဗျို့ 
<a href="http://www.m51a.com" target="_blank"><img src="http://widgia.com/wp-content/uploads/2009/10/dancing-icon-002.gif" border="0" alt="http://www.m51a.com"></a>
<a href="http://www.m51a.com" target="_blank"><img src="http://widgia.com/wp-content/uploads/2009/10/dancing-icon-003.gif" alt="http://www.m51a.com" border="0"></a>
<a href="http://www.m51a.com" target="_blank"><img src="http://widgia.com/wp-content/uploads/2009/10/dancing-icon-004.gif" alt="http://www.m51a.com" border="0"></a>
<a href="http://www.m51a.com" target="_blank"><img src="http://widgia.com/wp-content/uploads/2009/10/dancing-icon-005.gif"
<a href="http://www.m51a.com" target="_blank"><img
<a href="http://www.m51a.com" target="_blank"><img src="http://widgia.com/wp-content/uploads/2009/10/dancing-icon-007.gif"
<a href="http://www.m51a.com" target="_blank"><img src="http://widgia.com/wp-content/uploads/2009/10/dancing-icon-008.gif"
<a href="http://www.m51a.com" target="_blank"><img src="http://widgia.com/wp-content/uploads/2009/10/dancing-icon-009.gif"
<a href="http://www.m51a.com" target="_blank"><img src="http://widgia.com/wp-content/uploads/2009/10/dancing-icon-010.gif"
<a href="http://www.m51a.com" target="_blank"><img src="http://widgia.com/wp-content/uploads/2009/10/dancing-icon-011.gif"
a href="http://www.m51a.com" target="_blank"><img src="http://widgia.com/wp-content/uploads/2009/10/dancing-icon-014.gif"
<a href="http://www.m51a.com" target="_blank"><img src="http://widgia.com/wp-content/uploads/2009/10/dancing-icon-014.gif"
<a href="http://www.m51a.com" target="_blank"><img src="http://widgia.com/wp-content/uploads/2009/10/dancing-icon-015.gif"
<a href="http://www.m51a.com" target="_blank"><img src="http://widgia.com/wp-content/uploads/2009/10/dancing-icon-016.gif"
<a href="http://www.m51a.com" target="_blank"><img src="http://widgia.com/wp-content/uploads/2009/10/dancing-icon-017.gif"
<a href="http://www.m51a.com" target="_blank"><img src="http://widgia.com/wp-content/uploads/2009/10/dancing-icon-020.gif"
<a href="http://www.m51a.com" target="_blank"><img src="http://widgia.com/wp-content/uploads/2009/10/dancing-icon-021.gif"
လှချင်သော မိန်းကလေးများ အတွက် (Exercises) Sep 1, '10 11:20 AM
ပုံတစ်ပုံကို Upload တင် Sound Effect အနည်းငယ်ထည့် Save Animation လုပ်၊ နောက်ဆုံးမှာ Facebook သို့မဟုတ် My Space တစ်ခုခုမှာ Share လုပ်လို့ရပါတယ်။
Credit to : Time To Time Vol2No 48
ဒီနေ့ ကျွန်တော် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့စာအုပ်တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ
ပြည့်ပြည့်စုံစုံလွယ်လွယ်ကူရှာဖွေနိုင်တဲ့ ဆိုဒ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သူကတော့
ဟိုးအရင်ကတော့ Gigapedia ဆိုပြီးစတင်ရာကနေ ခုတော့ ဒီနာမည်ပြောင်းလိုက်ပါပြီ။ တစ်ခြားအသုံးများတဲ့ ဆိုဒ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ http://www.4shared.com, http://www.scribd.com တို့ပါ။ သူတို့က အစကတော့ Free ပေးပြီးခုတော့ အကန့်အသတ်နဲ့ပဲ ဒေါင်းခွင့်ပေးပါတော့တယ်။အကောင့်ဝယ်ထားရင်တော့ စိတ်ကြိုက်ဒေါင်းလို့ရပါတယ်။ ဒေါင်းချင်ရင် ကိုယ့်ဆီကတစ်ခုတင်ပေးရမယ်ဆိုတာလည်း လုပ်တတ်ပါတယ်။ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေဟာ Free ရဖို့ ရှာရခက်ပြီး သက်ဆိုင်သူအတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
ကဲ ခုတော့ ခင်ဗျားတို့လည်း ဘယ်လိုရှာရမယ်ဆိုတာ သိပြီဆိုတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံအကျိုးများဖို့အတွက် နီးစပ်ရာကျောင်းသူ၊ကျောင်းသား၊စာဖတ်သူတွေကိုလည်း လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါဦးလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေဗျာ။
သိပြီးသားလဲ ရှိမှာပါ..ကျွန်တော်က မသိသေးတဲ့သူတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးပြောပြတာပါ..ကျွန်တော်ပြောမယ့် site လေးကတော့ http://skydrive.live.com/ ပါ..အဲဒီ ဆိုဒ်လေးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကို 25GB ထိတောင် သိမ်းထားလို့ရတယ်ဗျာ..အဲနောက်ပြီး ကိုယ့် photo တွေလဲ share လို့ ရတယ် :) နောက်တစ်ခုကောင်းတာကတော့ Microsoft Office Application တွေကို အဲဒီ site ပေါ်မှာတင် သုံးလို့ရတယ်...
သင့်အနေနဲ့ကြီးမားတဲ့ file တွေကို ရွေ့ ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် online file
sharing service တွေကို အသုံးပြုရပါလိမ့်မယ် ။ sharing service site တွေမှာ
ကိုယ့် file ကို upload လုပ်ပြီး လက်ခံမယ့်သူထံကို link တစ်ခုအနေနဲ့ပို
့ပေးနိုင်ပါတယ် ။ နာမည်ကြီး file sharing
site သုံးခုကို ဥပမာဖေါ်ပြပေးချင်ပါတယ် ။
Box.net မှာ account လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ 1GB ပမာဏထိ upload လုပ်နိုင်ပါတယ် ။ upload လုပ်ပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ link ကို email နဲ့ ဒါမှမဟုတ် IM နဲ့အလိုရှိတဲ့သူဆီကို ပို
့ပေးနိုင်ပါ တယ် ။ Box.net မှာ 1GB
storage , 25 MB upload ကို အခမဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ် ။
DropBox မှာ Sign up လုပ်ပြီး upload လုပ်ထားတဲ့ file တွေကို သီးသန့်folder များအနေနဲ့ ထားရှိပြီးတော့ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ် ။ upload လုပ်ပြီးတဲ့အခါ sharing box မှာ မိမိပို
့ချင်တဲ့သူရဲ့ email လိပ်စာကို
ရိုက်ထည့်ပြီး upload link ကို ပေးပို
့နိုင်ပါတယ် ။ 5GB အထိအခမဲ့ upload လုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ် ။
YouSendIT ဟာ file တွေကို အမြန်ဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးပို့ ပေးနိုင်တဲ့ online file sharing site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ Register လုပ်ပြီးတဲ့အခါ file
တွေကို upload လုပ်ပြီး ပို့ နိုင်ပါပြီ ။
100MB ထိ အခမဲ့ upload လုပ်နိုင်ပြီး upload file တွေကို7ရက်ကြာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါ တယ် ။ upload လုပ်ရာမှာလည်း လျှင်မြန်ပါတယ် ။
online ပေါ်က link တော်တော်များများကို ရေးရ၊ မှတ်ရတာ ပြသနာ တစ်ခုပါ။ သိမ်းထားတဲ့ Link တွေလည်း တခါတလေ စာအုပ်မပါလာတာမျိုး ၊ ပျောက်သွားတာမျိုး မကြာမကြာ ကြုံရပါတယ်။
ဒီလိုပြသနာကို မကြုံရအောင် Online မှာ bookmarks လုပ်ထားတာဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
အဲဒီ Link ကတော့...
User အနေနဲ့ sign up လုပ်ရုံနဲ့ ကိုယ်ပိုင် Link တွေကို အလွယ်တကူ မှတ်သားနိုင်တယ်။ User Interface အနေနဲ့လည်း ရှင်းလင်းတာမို့ User အနေနဲ့ သုံးရတာ လွယ်ကူပါတယ်။